अफगानिस्थान विद्रोहीको कब्जामा : तालिबानविरुद्ध किन असफल भयो अफगानी सेना ? – khabarmala.com
s कुटनीति ताजा समाचार प्रोफाईल स्टोरी
अफगानिस्थान विद्रोहीको कब्जामा : तालिबानविरुद्ध किन असफल भयो अफगानी सेना ?
Newportalmala ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०१:१४	No Comments
तालिबानी लडाकुहरूले एक पछि अर्को अफगानी सहर कब्जा गर्दै गएपछि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भयो । ती लडाकुहरूले अफगानी सेनाबाट प्रतिरोध सामना गर्नु परेन? यो प्रश्नको जवाफ केही हदसम्म पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूले दिने प्रयास गरेका छन्, आ-आफ्ना रिपोर्टमार्फत । जहाँ उनीहरूले दाबी गरेका छन्, कतिपय स्थानमा त अफगानी सेनाले तालिबानसमक्ष सहजै आत्मसमपर्ण गरे । कुनै ठाउँमा त सेनाले गोली पनि चलाउन चाहेन ।
त्यसोभए, अमेरिकाबाट तालिम र हात हतियार प्राप्त अफगानी सेना तालिबानबाट सजिलै पराजित भएको हो त ? प्रश्न उठिरहन्छ । रोयटर्सका अनुसार अमेरिकाले अफगानी सेनाको तालिममा मात्रै करिब ८९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । तर महंगा सैन्य सामाग्री भएको अफगानी सेनाले तालिबानका लडाकुहरूसँग एक महिनामै घुँडा टेक्यो ।
केही दिनभित्रै तालिबानले अफगानिस्तानका मुख्य सहरहरु कब्जा गर्‍यो । पाकिस्तानसीमा नजिकको दक्षिणी सहर कान्दाहार देखि उत्तको माजार ए सरिफसम्म । अनि पश्चिमी हेरात देखि पूर्वी सहर जलालाबादसम्म । तालिबानका अगाडि कमजोर देखिएको सेनाको मनोबल बढाउन, अफगानी राष्ट्रपति असरफ घानीले प्रशंसा गरेका छन् । शनिबार टेलिभिजनमार्फत सेनालाई सम्बोधन गर्दै घानीले भने, ‘आफ्नो मुलुक र नागरिकको सुरक्षाका लागि अफगानी सेनाका जवान् वीरतापूर्वक लडेका छन्,’ तर उनै घानीले भने आइतबार साँझ अफगानिस्तान छाडेका छन् ।
उता युद्ध मैदानमा भने अफगानी सेनाका कयौँ युनिटले तालिबानसँग भिड्ने आँट नै गरेनन् । कतिपय युनिटले आफूलाई जिम्मेवारी दिएको पोस्ट नै छाडेर हिडे । कयौँले तालिबानसँग नलड्ने सहमति गरे । अनि अर्को सजिलो उपाय पनि अपनाएको देखियो, हतियार र अन्य सैन्य सामाग्री तालिबानलाई सुम्पिएर हिड्ने ।
कतिपय स्थानमा प्रान्तीय प्रमुखले नै आफ्ना सेनालाई आत्मसमपर्ण गर्न वा भाग्न सुझाए । प्रान्तीय स्तरका सरकारी पक्ष तालिबानविरुद्धको युद्ध अब जित्न सकिँदैन भन्ने निचोडमा पुगिसकेको थियो । जित्न नसकिने युद्धमा रगत किन बगाउने? सायद अफगानी सेनाका जवानले यसरी पनि सोचे ।
‘अफगानी सेनाको मनोबल कमजोर भएको देखियो । तालिबान अघि बढ्नुको कारण यो पनि हो,’ एक अमेरिकी अधिकारीले रोयटर्ससँगको कुराकानीमा भनेका छन् । अमेरिकी लामो समय देखि चिन्तित थिए, अफगानिस्तानमा बढ्दो भ्रस्टाचारलाई लिएर । राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त हुँदा युद्ध मैदानमा रहेका सैनिक जवानमा चरम निराशा थियो । उनीहरुलाई पर्याप्त तलब उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, तोकिएकै तलब पनि समयमा दिइदैन थियो । सैन्य सामाग्रीको अभाव, एकै स्थानमा महिनौँ रहनु पर्ने, स्पष्ट योजनाको अभाव लगायतका समस्या पनि युद्ध मैदानमा रहेका जवानहरुले भोग्नु परिरहेको थियो । कतिपय स्थानबाट त यी जवान सजिलै ताबिलानको अपहरणमा पर्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो ।
कयौँ वर्ष एकै महिनामा सय भन्दा बढी अफगानी सेनाका जवानले ज्यान गुमाइरहे । तर पनि अफगानी सेनाले युद्ध मैदान छाडेन । तालिबानसँगको भिडन्तमा घाइते हुने जवानहरुको हवाइ उद्धार हुने सम्भावना न्यून रहने गथ्र्यो । अमेरिकी र नेटोका फौज घर फर्कने भएपछि त, अफगानी सेनाका घाइते जवानहरुले पर्याप्त उपचार समेत पाउन छाडे ।
‘समयमा तलब नै नदिने, अनि आफ्नोबारेमा मात्र सोच्ने नेतृत्वका लागि ती जवानहरुले किन आफ्नो ज्यान दिने?,’ अर्का अमेरिकी अधिकारी प्रश्न गर्छन् । कतिसम्म भने तालिबान नेतृत्वमै रहेकाहरु पनि अफगानी सेनाका जवानहरुको अवस्थाको यसरी नै विश्लेषण गर्थे ।
‘जब अमेरिकाले फौज फर्काउन सुरु गर्‍यो, अफगानी सेनाले युद्ध लड्न छाड्यो । किनभने अमेरिकाको अनुपस्थितीमा अफगानी सेनाका जवानहरुसँग युद्ध लड्न कुनै कारण रहेन,’ गजनी प्रान्तका एक तालिबान कमाण्डरले रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘तर हामी एउटा विचार बोकर युद्धमा होमिएका हौँ । युद्ध जित्न हामीसँग कहिले उत्साह र प्रतिबद्धताको कमी भएन ।’
तालिबानसँग अफगानी सेना हार्नु भनेको अमेरिकी सेनाको असफलता हो । किनभने यत्तिका वर्ष अमेरिकी सेनाले नै अफगानी सेनालाई युद्धका लागि तयार गरेको हो । अमेरिकी सेनाले अफगानी सेनालाई आफैँ जस्तो पव्यवसायिक, प्रतिबद्ध र कुशल किन बनाउन सकेन ?
राजनीतिक र सैन्य नेतृत्व भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त हुँदा युद्ध मैदानमा रहेका सैनिक जवानमा चरम निराशा थियो । उनीहरुलाई पर्याप्त तलब उपलब्ध गराउनु त परको कुरा, तोकिएकै तलब पनि समयमा दिइदैन थियो । सैन्य सामाग्री तथा स्पष्ट योजनाको अभाव, एकै स्थानमा महिनौँ रहनु पर्ने, लगायतका समस्या पनि युद्ध मैदानमा रहेका जवानहरुले भोग्नु परिरहेको थियो । कतिपय स्थानबाट त यी जवान सजिलै ताबिलानको अपहरणमा पर्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो ।
अफगानी सेनाको संख्या तीन लाख रहेको दाबी गरियो । तर यथार्थमा अफगानी सेनाको संख्या कम थियो । त्यसमाथि पनि सेनाको स्पेसल फोर्समा झनै कम संख्यामा सैनिक थिए । तालिबानले एक एक गर्दै सहरहरु कब्जा गर्दै गएपछि भगौडा सैनिकहरुको संख्या बढ्दै गयो ।
अफगानी सेनाको संख्या घट््न थालेपछि स्थानीय मिलिसियाहरुलाई उपयोग गर्न थालियो । ती मिलिसियाहरु रसिद दोस्तम, इस्माइल खान लगायतका आदिवासी नेताहरुसँग नजिक थिए । हुन त पश्चिमा मुलुकहरु पहिलाबाटै यस्ता मिलिसियाहरुसँग ढुक्क थिएनन् । तर अफगानिस्तानमा केन्द्रीय सरकार र मुलुकमा उसको पकड मजबुद बनाउन आदिवासी नेता तथा तीनका मिलिसियाहरुको सहयोग चहिन्थ्यो नै । तर यी आदवासी नेता तथा मिलिसियाहरु पनि अनियमितता र अफगानी नागरिकलाई दुर्व्यवहार गर्ने मामलामा चोखो देखिएनन् ।
आइतबार आएका खबर अनुसार, दोस्तम उज्वेकिस्तानतर्फ लागेका छन् भने खानले तालिबानसमक्ष आत्मसमपर्ण गरेका छन् । कतिपयले सोध्नसक्छन्, अफगानिस्तान जस्तो मुलुकमा पश्चिमा शैलीको सैन्य शत्ति निर्माण गर्न सम्भव छ ? जबकि अफगानिस्तान विश्वकै गरिब मुलुकमध्येको एक हो । जहाँ ४० प्रतिशत नागरिक मात्र साक्षर छन् । अनि राष्ट्रवादको बलियो जग पनि छैन । त्यो पनि विदेशी हस्तक्षेपका कारण कमजोर बनेको छ ।
अमेरिकी सेनाका प्रशिक्षकहरुले के पनि भनेका छन् भने, अफगानी सेनाका जवानहरुलाई तालिम दिन कहिले पनि सहज महसुस भएन । आधारभुत ज्ञान बाढ्नै पनि असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो । ‘अधिकांश अफगानी सैनिक मुलुकका लागि युद्ध लड्न भन्दा पनि तलबका लागि भर्ति भएका हुन् । अफगानिस्तानमा रोजगारीको अभाव छ । यस्तोमा कमाइका लागि सेनामा भर्ती हुनु भरपर्दो विकल्प हो,’ अफगानिस्तमा खटिएको अमेरिकी नेतृत्वको विदेशी सैन्य फौजका लागि सल्लाहाकारको भूमिकामा रहेका जोनाथन स्क्रोडेनले भनेका छन् ।
तर स्क्रोडेनले भनेका बाहेकका पनि कारण छन् । कतिपय अवस्थामा युद्ध मैदानमा रहेका अफगानी सैनिकले आवश्यकिय हवाई सहयोग, हतियार तथा सैन्य सामाग्री अनि थप जनशक्ति नै पाउँदैन थिए । यस्तोमा तालिबानविरुद्धको युद्ध जित्ने अपेक्षा गर्नु मूर्खता सिवाय केही होइन ।
अफगानी सेनाले पटक पटक सैन्य सामाग्री तथा बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्ती कमजोर बनेको गुनासो गरिरह्यो । जनशक्ति बढाउनु पर्ने माग पनि सुनिएन । सेना भित्रकै एलिट युनिट पनि युद्धमा थाकिसकेको अवस्था थियो । गत महिना मात्रै यस युनिटका एक दर्जन कमाण्डोहरुको तालिबानले हत्या गरेका थिए । तालिबानविरुद्धको भिडन्तमा गोली सकिएपछि ती कमाण्डोहरुले आत्मसमर्पण गर्नु परेको थियो ।
पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रिचार्ड आर्मिटेज काबुलको अवस्थालाई उबेलाको भियतनामसँग तुलना गर्छन् । जर्ज डब्लु बुस प्रशासनमा सहायक विदेश मन्त्री रहेका आर्मिटेज अफगानी सेनाको असफलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असफलता मान्छन् । ‘धेरैले भनिरहेका छन्, अफगानी सेनाले युद्ध लड्न सकेन । तर म के भन्छु भने, अफगानी सेनाले युद्ध लडेकै हो, अझैँ पनि लड्न सक्छ । अन्तिम गोली रहेसम्म लड्न तयार छ । बरु प्रश्न के चाहिँ हुनसक्छ भने, अहिलेको अफगानी सरकारका लागि लडेर केही फाईदा छ?,’ आर्मिटेज प्रश्न गर्छन् ।
नागरिक फर्काउँदै विभिन्न देश
तालिवान काबुलतर्फ अगाडि बढेसँगै अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत देशले आफ्ना कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र नागरिकलाई स्वदेश फर्काइरहेका छन् । आफ्ना कर्मचारी तथा नागरिक फर्काउन अमेरिकाले करिब ५ हजार सैनिक काबुल पठाएको छ । उसले दूतावासका कर्मचारी तथा केही नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा अफगानिस्तानबाट बाहिर निकालेको जनाएको छ ।
दूतावास भवन भने तालिवानले नियन्त्रणमा लिएर अमेरिकी झन्डा हटाइदिएका छन् । त्यस्तै, बेलायतले पनि दूतावासका कर्मचारी र नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन ६ सय सैनिकलाई काबुल पठाएको छ । बेलायती राजदूत भने काबुलमै रहने जनाइएको छ । त्यसैगरी, स्विडेनले अफगानिस्तानस्थित दूतावासका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सोमबार स्वदेश फर्काउने जनाएको छ । स्विडेनले शुक्रबार मात्रै दूतावासका कर्मचारी घटाएको जनाएको थियो । क्यानडाले अफगानिस्तानस्थित दूतावासबाट सम्पूर्ण कामकारबाही स्थगित गरेको छ । क्यानडेली विदेश मन्त्रालयका अनुसार काबुलस्थित राजदूतसँगको कुराकानीपछि उक्त निर्णय लिइएको हो । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा अवस्था सामान्य भएपछि दूतावासले सेवा दिन थाल्ने जनाएको छ । अफगानिस्तानस्थित भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्कन पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । यसअघि मजार–ए–सरिफस्थित कन्सुलेट कार्यालय बन्द गरेको भारतले त्यहाँका कर्मचारी तथा नागरिकलाई मंगलबार विशेष जहाजबाट स्वदेश फर्काइसकेको छ ।
भारत सरकारका अनुसार अफगानिस्तानमा करिब १ हजार ५ सय भारतीय नागरिक छन् । तीमध्ये अधिकांश पुनर्निर्माण र विकाससम्बन्धी परियोजनामा काम गर्छन् । त्यस्तै, चीनले पनि विशेष विमान पठाएर आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेको जनाएको छ । अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ‘कोब्रा मिटिङ’ मा छलफल गरेका छन् । पछिल्लो अवस्था झन् खराब बन्दै गएको भन्दै जोन्सनले आइतबार बैठक गरेका हुन् । आपत्कालीन प्रतिक्रिया समिति ‘कोब्रा’ मा बेलायती सरकारका मन्त्रीहरू, सरकारी कर्मचारी र छलफलको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ सहभागी हुन्छन् ।
को हुन् तालिवान ?
पास्तुन भाषामा तालिवानको अर्थ हो, विद्यार्थी । इस्लामिक कट्टरपन्थी नेता मुल्लाह ओमरले परम्परागत शैक्षिक संस्था अर्थात् मदर्साका विद्यार्थीलाई संगठित गर्दै तालिवानको गठन गरेका हुन् । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को सुरुमा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियानका रूपमा सुरु भएको अभियान ४ वर्षपछि शक्तिशाली बन्यो । अफगान राजनीतिमा आएको विवादको फाइदा उठाउँदै सोभियत संघका एक लाख सेना सन् १९७९ को डिसेम्बरमा अफगानिस्तान पसेका थिए । फलस्वरूप अमेरिकाले सोभियत र अफगान सैनिकविरुद्ध मुजाहिद्दीनलाई हतियार तथा आर्थिक सहयोग गर्‍यो । अमेरिकालाई त्यतिबेला पाकिस्तान र साउदी अरबले खुलेरै समर्थन गरे । सन् १९८८ मा अफगानिस्तान, सोभियत संघ, अमेरिका र पाकिस्तानबीच शान्ति सम्झौता भयो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरे आफूहरूले मुजाहिद्दीनलाई सहयोग बन्द गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले राख्यो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लग्यो तर अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन । गृहयुद्धमा धकेलिएको अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दीनले सरकारविरुद्ध व्यापक सफलता हात पार्‍यो र सन् १९९२ मा नजिबुल्लाहको सरकार ढल्यो । मुजाहिद्दीन समूहका बुर्हानुद्दीन रब्बानीले अफगानिस्तानको नेतृत्व सम्हाले ।
सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा तालिवानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लियो । त्यसको एक वर्षपछि राजधानी काबुलमा नियन्त्रण जमाएपछि तालिवानले राष्ट्रपति रब्बानीलाई हटाएर इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको स्थापना गर्‍यो । जसलाई साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तानले औपचारिक मान्यता दिए । तालिवान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ तर त्यसको इस्लामावादले खण्डन गर्दै आएको छ ।
सन् १९९८ सम्ममा तालिवानले अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । अलकायदा संगठनले २००१ को सेप्टेम्बरमा ११ मा अमेरिकीमा आक्रमण गरेपछि भने तालिवानका खराब दिन सुरु भए । आक्रमणका प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसेकाले उनलाई पक्रन अमेरिकाले तालिवान सरकारसँग सहयोग माग्यो । तर, तालिवानले घटनामा अलकायदाको संलग्नता पुष्टि भएमात्रै समन्वय गर्न सकिने बतायो । तालिवानको प्रतिक्रियापछि चिढिएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गर्‍यो र २००१ डिसेम्बरमा तालिवान सत्ता धराशायी भयो ।
कस्तो होला तालिवान शासन ?
पास्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा स्थापनाका लागि सरिया कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गरेको तालिवान कठोर शासकका रूपमा परिचित छ । यसअघिको शासनकालमा तालिवानले निकै कडा सजाय दिने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तालिवानको निकै आलोचना भएको थियो । तालिवान शासनकालमा हत्यारा र यौन व्यभिचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिने तथा चोरी गर्नेको हात काटिदिने सजाय दिइन्थ्यो । १० वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान रोक लगाइयो । पुरुषले अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्नुपर्ने तथा महिलाले सम्पूर्ण शरीर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम ल्याइयो । टेलिभिजन, चलचित्र र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
दुई दशकपछि सत्तामा फर्कन लागेको तालिवानले पहिलेको तुलनामा केही खुकुलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संकेत दिएको छ । तालिवान प्रवक्ता सहिनले महिला अधिकारको सम्मान गर्ने तथा विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । ‘तालिवानले महिलाका साथै सञ्चारकर्मी र कूटनीतिज्ञको अधिकारको संरक्षण गर्छ,’ उनले भने । विश्लेषकहरूले यसलाई आफ्नो सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने तालिवानको रणनीति भएको बताएका छन् । यसअघि अमेरिका, चीन, बेलायत, क्यानडा तथा युरोपेली संघले हिंसात्मक माध्यमबाट सत्ताकब्जा गरेको खण्डमा तालिवानलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
Previous Previous post: कांग्रेस महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म
Next Next post: महासचिव शर्मा उपाध्यक्षको उम्मेदवार
परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘कु’ ले एनआरएनएमा अन्योल
ईपीएस कामदार नोभेम्बर अन्तिम सातादेखि कोरिया आउन पाउने
प्रधानन्यायाधीश जबराबारे उपयुक्त निर्णय लिन भन्दै बारले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने
नेपाल–भारत सम्बन्ध थप कसिलो बनाउने सहमति
तत्काल एनआरएनए निर्वाचन गर्न परराष्ट्र सचिव पौडेलसँग माग
परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘कु’ ले एनआरएनएमा अन्योल ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०१:१४
ईपीएस कामदार नोभेम्बर अन्तिम सातादेखि कोरिया आउन पाउने ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०१:१४
प्रधानन्यायाधीश जबराबारे उपयुक्त निर्णय लिन भन्दै बारले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०१:१४
नेपाल–भारत सम्बन्ध थप कसिलो बनाउने सहमति ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०१:१४
तत्काल एनआरएनए निर्वाचन गर्न परराष्ट्र सचिव पौडेलसँग माग ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०१:१४
अमेरिकाको अड्डामा जब नेपाली झन्डा फहरायो ३२ श्रावण २०७८, सोमबार ०१:१४